बिदेशमा दैवले हात र खुट्टा चुडेर लगेपछि चुहिएकाे घरबाट छोरीहरू च्यापरे पोखे यस्तो पीडा! (भिडियोमै हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > बिदेशमा दैवले हात र खुट्टा चुडेर लगेपछि चुहिएकाे घरबाट छोरीहरू च्यापरे पोखे यस्तो पीडा! (भिडियोमै हेर्नुस्)
गुल्मी सत्यवती गाउपालिका वार्ड न १ अस्लेवाका यादब पाण्डे १० बर्ष पहिले भारत गए । विवाह गरेको २ बर्षमै उनी भारत जादा श्रीमती गर्भवती थिइन । सम्पत्ती कमाउने र सुन्दर परिवार बनाउने सपना बोकेर भारत पुगेका उनका सपना फुल्न पनि पाएनन । जब उनी रेलबाट उत्रीदा दुर्घटनामा परे । बेहोस भएका उनी अस्पतालमा जब बिउँझिए बल्ल थाहा पाए उनका देब्रे तिरका हात र खुट्टा दुबै काटिएका छन । अब के रह्यो र जिन्दगीमा?
उनी बिउँझीएपछि अस्पातलका कर्मचारीले घर कहाँ भनी सोध्दा एक छिन टोलाए र भने मेरो घर छैन त्यस पछि भारतको सम्बन्धित निकायले उनलाई कुनै आश्रममा लगेर राख्यो पाण्डे यस्तो पिडा दायक अवस्थामा पनि आफ्नो घर परिवार गराउन चाहेनन् बर्ष बिती सके पछि उहाको भाई खोज तलास गर्दै उहा संग भेटेर घरमा उनलाई लगियो।